IPhone News 6x15 Podcast: Adeegga TV-ga ee qulqulaya ee Apple ayaa hoos u dhacaya | Wararka IPhone
Taylor Swift «ku soo noqo» Podcast-keena abuurista khilaafyada markale. Farshaxanistaha ayaa ku dhawaaqay mid gaar ah shirkadda Apple Music, taas oo mar kale dhalisay dhaleeceyn loo soo jeedinayo farshaxan oo xilliyadii la soo dhaafay si weyn ugu dagaallami jiray adeegsiga muusigga.
Barnaamijkaan sidoo kale waxaan uga hadlaynaa ku guuldareystay bixinta TV ga waxaa qorsheeyay shirkadda Apple. Waxaan kuu sheegeynaa waxa dhacay iyo sababta uusan iftiinka u arki doonin. Waxaan sidoo kale dhex galnay telefishanka ay shirkaddu qorsheysey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 6 × 15 Podcast ee Actualidad iPhone: Adeegga TV-ga ee qulqulaya ee Apple ayaa hoos u dhacaya
Apple wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.2.1
IPad News 2x15 Podcast: Nalalka iyo Hooska Apple ee 2015